Socdaalka Imaaraadka, oo ay ku jiraan Dubai, India, iyo 14 dal oo kale ayaa la yimaada ciqaab adag Sacuudiyiinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Socdaalka Imaaraadka, oo ay ku jiraan Dubai, India, iyo 14 dal oo kale ayaa la yimaada ciqaab adag Sacuudiyiinta
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Hindiya • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Maalmaha COVID-19 waxaa jira laba nooc oo xiriir ah oo ka dhexeeya waddamada. In kasta oo xiriirka ka dhexeeya Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka deriska la ah uu aad u wanaagsan yahay, COVID-19 wuxuu sharci darro ka dhigay Muwaadiniinta Sacuudi Carabiya inay booqdaan Dubai, Abu Dhabi iyo inta kale ee Imaaraadka Carabta-ciqaabtoodu waa adag tahay.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa wadan ka mid ah 35,393,638 qof. Laga bilaabo maanta, 522,108 Sacuudiyaan ah ayaa qabtay COVID-19 8200 na way dhinteen.
Sacuudi Carabiya waxay ku jirtaa booska 126 aduunka marka loo eego wadamada ugu badan ee adduunka ee COVID iyo lambarka 118 ee la xiriira heerka dhimashada.
Imaaraatka Imaaraatka iyo 15 dal oo kale ayaan ku jirin liiska casaanka safarka ee loogu talagalay Muwaadiniinta Sacuudiga oo leh ciqaab adag oo loogu talagalay kuwa ku xadgudba.
Xilligan, 11,379 Sacuudi Carabiya ayaa qaba COVID-19 1,406 kiisna waa isbitaallo culus.
Toddobaadkii la soo dhaafay Boqortooyada ayaa diiwaangelisay 8,824 kiis oo cusub, halka ay ahayd 8,324 usbuucii hore, taas oo ah koror 6% ah. 85 qof ayaa gudbay, marka la barbar dhigo 95 usbuucii hore, taas oo ah 11% hoos u dhac.
20% Muwaadiniinta Sacuudi Carabiya ayaa si buuxda loo tallaaley markii la siiyay labada tallaal, 33% kale ayaa qaatay qiyaasaha hore.
Deriska Isutagga Imaaraatka Carabta wuxuu leeyahay 69% dadkiisa oo si buuxda u tallaalay iyo 8.5% oo dheeri ah ayaa helay qiyaasta ugu horreysa.
Mareykanka marka la barbardhigo wuxuu 49% tallaalay 7.8% dheeraad ah isagoo qaatay tallaalkii ugu horreeyay.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya si kastaba ha ahaatee waxaa ku jira UAE liiska liisaska gaduudan oo ka dhigista safarka Emirates inay tahay fal dambiyeed.
Liibiya, Suuriya, Lubnaan, Yemen, Iiraan, Turkiga, Armenia, Itoobiya, Soomaaliya, Koongo, Afgaanistaan, Venezuela, Belarus, Hindiya, iyo Fiyatnaam ayaa sidoo kale ku jira liiska casaanka Sacuudiga.
Muwaadin kasta oo Sacuudi ah oo lagu qabto isagoo u socdaalaya mid kasta oo ka mid ah dalalka liisaska cas ayaa wajahaya ganaaxyo ay ka mid yihiin xayiraad socdaal oo saddex sano ah.
Wasaaraddu waxay ugu baaqday muwaadiniinta inay ka fogaadaan inay si toos ah ama si dadban ugu safraan waddamada liisaska liisaska leh ee aan weli la xakamayn masiibada oo ay aad ugu badan yihiin kiisaska noocyada kala duwan ee cudurka coronavirus.
Waxay sidoo kale ku boorisay muwaadiniinta inay taxaddaraan oo ay ka fogaadaan meelaha ay xasilooni darrada ka jirto ama fayraska ku faafayo, ayna qaadaan dhammaan tallaabooyinka ka hortagga ah iyadoo aan loo eegin meesha ay u socdaan.
Sacuudi Carabiya waxay hada si weyn u maalgashanaysaa dhisida safarada iyo dalxiiska iyo taageerida aduunka balaayiin doolar oo lagu taageerayo waaxda dalxiiska.
UNWTO, WTTC, Adkaysiga Dalxiiska, iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka ayaa dhammaantood xafiisyo ka furtay Boqortooyada. Markii dunida dalxiisku u baahnayd caawimo, Sucuudiga ayaa kajawaabay wicitaankii, isaga oo boqortooyada galiyay kursiga hogaamiyaha aduunka ee waaxdan.
Sidoo kale, safarada iyo dalxiiska warshadaha wadamada GCC hiyadoo la arkay koboc aad u weyn dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Cutubka Sucuudiga ee Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa bilaabay Kooxda Dalxiiska Sacuudiga waxqabadka.